တရုတ်နိုင်ငံက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံပံ့ပိုး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံပံ့ပိုး
ဘန်ကောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံအား ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ နောက်ထပ်တစ်သုတ်အား နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၌ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး၌ တရုတ်နိုင်ငံက အဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်-အို-ချာက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးနှင့် ဒေသတွင်းရေးရာများ အပါအဝင် နယ်ပယ်အားလုံး၌ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Han Zhiqiang က တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး၊ စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရေး၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းရေးရာများ၌ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီး၌ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပူးတွဲထိန်းသိမ်းရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China provides more COVID-19 vaccines to Thailand to help fight pandemic
BANGKOK, Nov. 12 (Xinhua) — China on Friday provided another batch of COVID-19 vaccines and anti-pandemic supplies to Thailand to help it fight the virus.
Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha expressed his appreciation for China’s continued support to his country in fighting the pandemic, saying that Thailand stands ready to further enhance cooperation with China, including in research and development of COVID-19 vaccines.
The prime minister said Thailand is willing to boost cooperation between the two countries in all fields including economy and regional affairs.
Chinese Ambassador to Thailand Han Zhiqiang said that China stands ready to work with Thailand to fight the pandemic and promote economic recovery, boost communication and coordination in international and regional affairs and jointly maintain peace, stability and prosperity in the region and the world at large. Enditem
Photo : Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha (4th L) and Chinese Ambassador to Thailand Han Zhiqiang (3rd L) attendahandover ceremony in Bangkok, Thailand, on Nov. 12, 2021. China on Friday provided another batch of COVID-19 vaccines and anti-pandemic supplies to Thailand to help it fight the virus. (Xinhua/Wang Teng)
သြစတြေးလျနိုင်ငံက COVID-19 မြင့်တက်မှုကို မတ်လတွင် ရင်ဆိုင်ရနိုင်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ နာဂါဟာပြည်နယ်ရှိ ဗလီအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၌ လူ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရ